AKHRISO: Kulamo xasaasi ah oo ka socda Addis Ababa, Madaxdii Jigjiga joogtay oo Addis kusugan & Wararkii ugu dambeeyey – Puntlandtimes
AKHRISO: Kulamo xasaasi ah oo ka socda Addis Ababa, Madaxdii Jigjiga joogtay oo Addis kusugan & Wararkii ugu dambeeyey
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Inta badan xubnihii Ismaamulka Soomaalida ee golayaasha kala duwan ee deegaankaas ayaa shalay galab la geeyey magaalada Addis Ababa, ka dib markii ay sidaas amartay Xukuumada Faderaalka ee Itoobiya, waxaana ilaa hadda ay wararku sheegayaan in ay kulamo gaar-gaar ah ka socdaan magaalada.
Madaxda Itoobiya ee kusugan Addis Ababa waxay doonayaan in ay helaan nidaam ay ku maamulaan gudaha Ismaamulka Soomaalida, oo mar kasta dhibanaha koowaad u ah nidaamka Addis Ababa, gaar ahaana dawladda dhexe oo ka aaminsan gobal xoog ay ku haysato.
Madaxweynaha cusub ee maamulkaas Axmed Cabdi Ilkacase oo xilka kala wareegay Madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kamid ah dadka jooga Addis Ababa, sidaas oo kale saaxiibadiisii xagga siyaasadda iyo wada shaqeyntu ka dhaxaysay ayaa jooga Iyana oo kulamada qeyb ka ah.
Xukuumada Faderaalka Itoobiya waxay ciyaaraysaa door ku aadan in ay xubno badan iyo talada u dambeysaba ku yeelato maamulka Jigjiga, waxayna xooga saaraysaa in ay xubnaha ugu sareeya, Guddiga Dhexe, Guddiga Fulinta ay intaba ku yeeshaan qaar kamid ah xubnaha taabacsan oo ay ku darsadaan.
Caqabado waa weyn ayaa ka haysta dhinacyadaas oo dhan, waxayna hardan adag kala kulmayaan Guddigii saaxiibada la ahaa Madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar oo xooga saaraya in aan marnaba dhexdooda la galin, balse laga wada shaqeeyo masaalixda guud ee deegaanka.
Ilaa hadda Ismaamulka Soomaalida ayaa ah maamul la’aan, waxaana aan shaqeynin dhamaan hay’addihii dawliga ahaa, waxaana meesha oo dhan ka baxay wax kasta oo nidaam lahaa, Milateriga ayaa maamulaya Jigjiga, laakiin agagaarkeeda iyo gudaha qeybo kamid ah ciidamada daacada u ahaa Hogaamiyihii Cabdi Illey ayaa haysta oo kusugan.